I-kinetic energy: iyini, yenzelwa ini futhi ibalwa kanjani | Isimo Sezulu Senethiwekhi
IsiJalimane Portillo | 08/10/2021 10:00 | Ciencia
Esihlokweni se-physics sesikhungo i Amandla we-Kinetic. Kubhekwa njengenye yezinhlobo ezibaluleke kakhulu zokuhamba kwezinto. Kodwa-ke, kunzima ukuyiqonda uma ungenalo ulwazi oluyisisekelo lwe-physics.
Ngakho-ke, sizonikezela le ndatshana ukukutshela konke odinga ukukwazi ngamandla we-kinetic nokuthi yiziphi izici zayo eziyinhloko.
1 Yini amandla kinetic
2 Ukubalwa kwamandla kinetic
3 Amandla ahilelekile
4 Ifomula yamandla ka-Kinetic
5 Isibonelo esisebenzayo
Yini amandla kinetic
Uma kukhulunywa ngalolu hlobo lwamandla, abantu bacabanga ngalo njengamandla atholakala ukukhiqiza ugesi noma okufana nalokho. Amandla we-Kinetic amandla into anayo ngenxa yokunyakaza kwayo. Lapho sifuna ukusheshisa into, kufanele sisebenzise amandla athile okunqoba ukungqubuzana komhlaba noma komoya. Ngalokhu, sidinga ukwenza umsebenzi. Ngakho-ke, sidlulisa amandla entweni futhi ingahamba ngejubane eliqhubekayo.
Yile mandla adlulisiwe abizwa nge-kinetic energy. Uma amandla asetshenziswe entweni ekhula, into izoshesha. Kodwa-ke, uma siyeka ukusebenzisa amandla kuyo, amandla ayo e-kinetic azokwehla ngokushayisana ize iyeke. Amandla we-Kinetic ancike kubukhulu nesivinini sento.
Imizimba enobunzima obuncane idinga umsebenzi omncane ukuqala ukuhamba. Uma uhamba ngokushesha, amandla we-kinetic umzimba wakho unawo. La mandla angadluliselwa ezintweni ezahlukahlukene futhi phakathi kwawo aguqulwe abe olunye uhlobo lwamandla. Isibonelo, uma umuntu egijima futhi eshayisana nomunye owayephumule, ingxenye yamandla ekinetic eyayikumgijimi izodluliselwa komunye umuntu. Amandla okumele asetshenziselwe ukunyakaza ukuba khona kufanele ngaso sonke isikhathi abe mkhulu kunamandla okuhilizisana nomhlabathi noma olunye uketshezi njengamanzi noma umoya.
Ukubalwa kwamandla kinetic
Uma sifuna ukubala inani lale mandla, kufanele silandele ukucabanga okuchazwe ngenhla. Okokuqala, siqala ngokuthola umsebenzi oqediwe. Kuthatha umsebenzi ukudlulisa amandla we-kinetic entweni. Futhi, uma kubhekwa ubukhulu bento edudulwa ibanga, umsebenzi kufanele uphindwe ngamandla. Amandla kufanele afane nobuso akuso, ngaphandle kwalokho into ngeke ihambe.
Cabanga ukuthi ufuna ukuhambisa ibhokisi, kepha ulicindezela phansi. Ibhokisi ngeke likwazi ukunqoba ukumelana komhlaba futhi ngeke lihambe. Ukuze ikwazi ukuhamba, kufanele sisebenzise umsebenzi futhi siphoqelele ekuqondeni okuqondana nomphezulu. Umsebenzi sizowubiza ngo-W, amandla F, ubukhulu bento m, nebanga d. Umsebenzi ulingana nebanga lezikhathi zamandla. Okusho ukuthi, umsebenzi owenziwayo ulingana namandla asetshenziswa entweni ngebanga eliyihambayo ngenxa yalowo mandla asetshenzisiwe. Incazelo yamandla inikezwa ngobuningi nokusheshisa kwento. Uma into ihamba ngejubane elingaguquguquki, kusho ukuthi amandla asetshenziswayo namandla okuxubana anenani elifanayo. Ngakho-ke, zingamandla agcinwa esilinganisweni.
Lapho amandla asetshenziswe entweni ancipha, izoqala ukwehla ize iyeke. Isibonelo esilula yimoto. Lapho sishayela emigwaqweni, i-asphalt, ukungcola, njll. Umgwaqo usinikeza ukumelana. Lokhu kumelana kubizwa ngokuthi ukungqubuzana phakathi kwesondo nengaphezulu. Ukukhuphula ijubane lemoto, kufanele sishise uphethiloli ukukhiqiza amandla we-kinetic. Ngalo mandla, ungakwazi ukunqoba ukungqubuzana bese uqala ukuhamba.
Kodwa-ke, uma sihamba nemoto futhi siyeke ukushesha, sizoyeka ukusebenzisa amandla. Uma kungekho mandla emotweni, umbango ngeke uqale ukubhuleka ize ime. Ngakho-ke, kubalulekile ukuthi ube nokuqonda okuhle ngamandla ohlelo lokungenelela ukuze uqonde ukuqondiswa okuzothathwa yinto.
Ifomula yamandla ka-Kinetic
Ukubala amandla we-kinetic kune-equation evela ekucabangeni okusetshenziswe ngaphambilini. Uma sazi isivinini sokuqala nesokugcina sento ngemuva kwebanga elihanjiwe, singafaka esikhundleni ukusheshisa kwifomula.
Ngakho-ke, lapho inani eliphelele lomsebenzi lenziwe entweni, inani esilibiza nge-kinetic energy k liyashintsha.
Kososayensi, ukuqonda amandla we-kinetic wento kubalulekile ekutadisheni amandla ayo. Kunemizimba ethile yasezulwini esikhaleni esinayo amandla we-kinetic aqhutshwa yi-Big Bang futhi asasebenza kuze kube namuhla. Kuwo wonke ama-solar, kunezinto eziningi ezithokozisayo okufanele zifundwe, futhi kuyadingeka ukuqonda amandla abo we-kinetic ukubikezela imikhondo yabo.
Lapho sibheka i-kinetic energy equation, siyabona ukuthi kuncike esigcawini sevosive yento. Lokhu kusho ukuthi uma ijubane liphindwe kabili, amandla alo enyuka amahlandla amane. Uma imoto ihamba ngebanga elingu-100 km / h, amandla ayo aphindwe kane kunemoto ehamba ngo-50 km / h. Ngakho-ke, umonakalo ongadaleka engozini mkhulu ngokuphindwe kane kunowengozi.
La mandla awakwazi ukuba yinani elibi. Ngaso sonke isikhathi kufanele kube zero noma okuhle. Ngokungafani nayo, isivinini singaba nenani elihle noma elibi ngokuya ngesethenjwa. Kepha uma usebenzisa i-velocity squared, uhlala uthola inani elihle.
Ake sithi sisesigabeni sezinkanyezi futhi sifuna ukufaka ibhola lephepha kudoti. Ngemuva kokubala ibanga, amandla ne-trajectory, kuzofanele sisebenzise inani elithile lamandla we-kinetic ebholeni ukulisusa esandleni sethu liye kudoti. Ngamanye amagama, kufanele siyisebenzise. Lapho ibhola lephepha lishiya isandla sethu, lizoqala ukusheshisa, futhi amandla ayo okulingana azoshintsha asuke ku-zero (ngenkathi sisesandleni) iye ku-X, kuya ngokuthi ishesha kangakanani.
Ekuphakeni okumpontshiwe, ibhola lizofinyelela amandla alo ophakeme kakhulu we-kinetic mzuzu lapho lifinyelela ezingeni eliphakeme kakhulu. Ukusuka lapho, njengoba uqala ukwehlela emgqonyeni kadoti, amandla akho e-kinetic azoqala ukwehla njengoba edonswa amandla adonsela phansi futhi aguqulwe abe amandla. Lapho ifinyelela phansi kukanini kadoti noma emhlabathini bese ima, amandla okulingana kwamandla e-kinetic ebhola lephepha azobuyela eqandeni.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi mayelana nokuthi iyini i-kinetic energy nokuthi yiziphi izici zayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » Amandla we-Kinetic
Isimo Sezulu Somklomelo KaNobel 2021